Xubno Komishinka Doorashooyinka S/land ka mida oo quudaraynaya in dib loo soo celiyo+Gudoomiyaha Komishinka oo ku tiraabay inay ahayd inaan la kala dirin waqtigan iyo wuxu ku sababeeyay!
Gudoomiyaha komishinka doorashooyinka Somaliland Axmed Xirsi Geelle ayaa ku tiraabay inkastoo mudo xiloodkoodu ku eeg yahay 29 Oktobar 2014ka, tahayna in Komishin cusub la magacaabo ama iyagaba la daayo, uu haddana door bidi lahaa in waqtigan oo siduu sheegay ay ku jiraan hawlo culculus oo ay diiwaangelinta iyo doorashadu ka mid tahay, ahayd in la daayo oo aan la kala dirin.
Gudoomiyuhu wuxuu ka sanqadhiyey inaanay jirin wareegto lagu kala diray komishinkooda balse madaxweyne Siilanyo qoraalo u kala diray labada xisbi mucaarad iyo guurtida si ay u soo xulaan xubnaha uga mid noqonaya komishinka iyaga bedeli doona.
Geesta kalena wuxuu Gudoomiyaha komishinka Geelle carabka ku adkeeyay inay banaan tahay in xubnaha komishinka Muddo xiloodkoodii dhamaaday xubno ka mid ah dib loo soo celin karo ama dib loo soo magacaabi karo.
Yeelkeede xoggo isa soo taraya oo yaalla goobaha siyaasada iyo arimaha doorashooyinka Somaliland lagu gorfeeyo ama lagu falanqeeyo ayaa tibaaxaya in sadex xubnood oo ka mid ah Komishinka waqtigoodii dhamaadey quudaraynayaan in dib loo magacaabo,Xubnahaasna waxaa ka mida gudoomiyaha hadda Axmed Xirsi Geelle oo lagu xanto shaqsiyad u dhega nugul,afkana ku difaaci kara hadba cidii wax ku shubata oo la filaayo in madaxweyne Siilanyo dib u soomagacaabo,sidoo kale Labada Xubnood ee Raabi iyo Dixood ayaa la filayaa in Gudoomiyaha Guurtida Saleebaan Gaal dib u soo magacaabo.
Madaxweyne Barack Obama ayaa kooxda Daacish ku sheegay inay la mid yahiin cudurka Kansar “cancer” ee aan tegin ilaa iyo inta laga dabar-jarayo. Hoggaanka Xisbullah, Xassan Nasrallah, ayaa isaguna ku tilmaamay “Bahalo Yahaabur ah”. Sidoo kale, Madaxweynaha Iiraan Xassan Rouxaani ayaa Dunida Islaamka uga baaqay in ay ka digtoonaadaan “Argagaxisadaa Baahalaha ah” ee cid kasta ku soo maqan. Xattaa Ururka Al Qaacida oo ay ka tirsanaayeen ayaa isaguna iska beri yeelay iyagoo ku eedeeyay falxumooyin ay ku xasuuqayaan maatada.
Muftiga Sacuudiga Shiikh Cabdulcasii Aala Shiikh ayaa farta ku fiiqay ururka Daacish in uu yahay “Cadowga 1aad ee Ummadda Islaamka”. Isla markaa, Sheekha Al-Azhar ee Masar ayaa ku dhawaaqay kooxda Daacish in aan loo nisbayn Karayn magaca Islaamka. Muftiga Masar Shiikh Shawki Ibraahim ayaa sheegay Daacish in ay dayro ka yahiin Islaamka iyo in loo aqoonsado“Qawlaysato ka soo fallaagoobay Al-Qaacida”. Dhammaan culimada Islaamka ayaa qurub xaaraan ah ka dhigay ururka Daacish.
Sidaa awgeed, Madaxweyne Obama waxaa uu amray taliska ciidamadiisa (Pentagon) in ay oodda ka soo qaadaan dayuuradaha sahanka si loogu kuur galo dhaqdhaqaaqa Daacish ee Suuriya iyo Ciraaq. Maraykanku, dirirta Daacish waxaa uu la kaashanayaa Iiran, Suuriya iyo Xisbullah oo hore ay u ahaayeen col daahood go’ay. Aragtida xilligan shaqaynaysaa ayaa ah “dalna ma laha col ama saaxiib joogta ah balse dal kastaa waxaa uu leeyahay “Dan Joogta Ah.”
Si loo wiiqo Daacish, Ingiriis, Faransiis iyo guud ahaan dalaka Yurubta Galbeed ayaa iyaguna xaadhxaadhanaya halkii ay ka soo geli lahaayeen dagaalka. Sacuudigu waxaa uu u habar wacday xulufadiisa khaliijka iyo Masar. Isla markaana, Boqorku, waxaa uu 100 milyan oo Doollar ugu yaboohay Qaramada Midoobay si loo laayo Daacish.
Ka sokow in ay dagaal fool ka fool ah ku la jiraan ciidamada Ciraaq iyo Suuriya, kooxda Daacish waxaa ay dirir qadhaadh ku la jiraan maleeshiyada Shiicada Ciraaq, Suuriya iyo Libnaan. Waxaa kale oo ay la faltamayaan Ciidamada Xorta ah iyo Jabhadda Nusra ee Suuriya iyo Xisbullahiga Libnaan, Daacish waxaa ay Bariga Ciraaq kula legdamaysaa Isbahaysiga Maraykan iyo ciidamada Bashmarg ee Kurdiga. Intaa waxaa u dheer dagaalo goosgoos ah oo ay faraha isu la taageen ilaalada Kacaanka Iiraan oo u soo gurmaday in ay ka badbaadiyaan goobaha muqadiska ah ee Shiicada Ciraaq. Waxaa kale oo ururku soohdimaha Ciraaq ku la dirirayaan Turkiga, Sacuudiga iyo Urdun iyagoo haysta degaamo aan ka fogayn xuduudaha.
Haddaba, waa ayo ururka Daacish ee adduunku u soo garaacayso durbaanka dagaalka? Se marka hore waxaan is kor taagaynaa halka sartu ka qudhuntay iyo waxaa soo kiciyay ladhka iyo colaadda heer caalami ee ku soo aadan kooxdaas.
Maxaa Ladhka Soo Kiciyay?
Warbaahinta caalamka waxaa hadheeyay dhacdooyin bahalnimo oo loo aaneeyay Dawlad-ku-sheegga Islaamka ee Ciraaq iyo Shaam ee loo yaqaano DAACISH (ISIL ama ISIS). Runtii, muddo sannad ah, adduunka waxaa ka shidnaa cajalado muujinaya falal argagax badan oo kooxdu ka fuliyeen Suuuriya iyo Ciraaq. Balse, hadal-hayntu waxaa ay aad u soo korodhay markii 19kiiAugust gawrac labada dhegood loogu simay suxufi Maraykan ah, James Foley, inkastoo, xeeldheerayaal badan ay muuqaalka gawraca ku sheegeen mid samays ah.
Gawraca suxufigu waxaa uu soo kiciyay ladh aasnaa iyo colaad meelo faro badan laga rimanaa. Sidaa darted, hadalada is daba-joogga ah ee ka soo yeedhay Madaxweyne Obama waxaa loo arkaa Maraykanka in ay ka go’an tahay in uu faraha u la tago kooxdaas ila iyo inta uu ka dabar goynayo. Dagaalka Obama uu sida dadban u iclaamiyay ma aha mid cusub balse waxaa uu soo taxnaa tan iyo 8dii August markaas oo Maraykanku uu cirka ka duqeeyay kooxda Daacish si looga badbaadiyo beesha Yazidi ee Masiixiga ah oo ay dil, kufsi iyo boob ku moora duugeen. Ilaa 30,000 ayaa ka soo barakacay degaamada beeshaa oo dantu ku keliftay in ay ku hirteen buuro aan gaadiidku geli karayn. Duqaynta cirka waxaa kale oo ay salka ku haysay in kooxdaa laga furdaamiyo Biyo-xidheenka Mosul oo ay gacanta ku hayeen. Biyo-xidheenku waxaa uu yahay dhuunta nololeed ee si toos ah looga quudiyo dad malaayin gaadhaya. Ilaa hadda in ka badan boqol duullimaad ayuu Maraykanku la beegsaday Daacish. Waxaana laga furfuray faro-ku-hayntii biyo xidheenka Mosul inkastoo ay weli dhabarka ku sii hayaan.
Waa Maxay Xeeladaha Lagu Curyaamina Karo Daacish?
General Martin Dempsey, Guddomiyaha taliyayaasha ciidamada Maraykanka, waxaa uu tibaaxay, si loo jebiyo ciidamada Daacish in loo baahan yahay iskaashi milatari oo Maraykanku ku yeesho dhulka ay beelayadu ka aloosan tahay. Isaga oo arrintaa diiradda saaraya waxaa uu warbaahinta u sheegay in aan loo maaro helayn kooxda Daacish, haddii, si mug leh, beelaha Sunnahu aanay dagaalka uga qayb qaadan.
“Ma dhici karto in laga adkaado Daacish haddii aan gacan-saar lala yeelan 20ka milyan ee Sunnaha ah ee degaankooda teedsan yahay Dimishiq (caasimadda Suuriya) ilaa Baqdaad (caasimadda Ciraaq),” ayuu ku tiraabay jananku.
Colaadda ragaaday ee ka dhex ooggan Sunnaha iyo Shiicada ayaa ciidamada Daacish u suurata gelisay in ay hal mar ka dagaalamaan dhowr dal. Ciidanka u jooga aagga Ciraaq oo lagu qiyaasay ilaa 3,000 waxaa uu jebiyay ciidankii qaranka oo tiradoodu kor u dhaaftay 900,000. Sida laga soo xigtay gaashaan-dhigga Maraykanka (Pentagon), hal dalool (300,000) ayaa weli ku sii baaqi ah ciidanka Ciraaq iyadoo labada dalool ee kale (600,000) ay isugu jiraan haraadigii Saddaam Xuseen oo aad loo takooray, kuwo fiqi tolkii kama janno tago ah oo u xagliyay beelaha Sunnaha ee iska caabinaya Al-Maaliki (raiisal-wasaarahii Ciraaq ee hadda xukunka laga fara maroojiyay). Isla markaa, ciidanka in badan oo kale ayaa ka cabanaya duruufaha nololeed iyo eexda ka dhex jirta maamulka.
Dalka Ciraaq waxaa ka ooggan colaad hubaysan taas oo muddo dheer xukuumaddii Nuur Al-Maaliki ay ku taamaysay in ay xoog ku muquuniso dadyowga Sunnaha kuwas oo iyaguna intii tamartooda ah kala hor tegay qori. Run ahaantii, Kooxda Daacish oo Sunnaha lagu tiriyo waxaa ay ka faa’iidaysteen dirirta sokeeye. Waxaana ay soo dhex-qaadeen degaanada Sunnaha. Sidaa darteed, waxaa u fududaatay in ay gacanta ku dhigaan inta badan bedka dalka Ciraaq. Waxaa ay shan farood iyo calaacal ku qabsadeen Mosul oo ah caasimadda labaad ee dalka halkaas oo ay ka furteen hub aad u tiro iyo tayo badan. Isla markaa, waxaa ay kaga hodmeen hanti laxaad leh oo ay ka fadhataysteen kaydkii baananka iyo ganacsatada Mosul.
Dhinaca kale, Suuriya iyadana waxaa adag sidii ay talo uga islaaxi lahayd. Halkaa waxaa ku faltamaya xukuumadda Bashaar Al Assad iyo xoogagga mucaaridka sida Ciidanka Xorta ah, Ururka Islaamiga ah ee Nusra (Al-Qaacida) iyo kooxda Daacish ama ISIS. Waxaa xusid mudan, dagaalkii mideeyay xoogagga mucaaridku in uu isu rogay mid ay iyagu isu dilaan heer aan waxba la isu hanbaynayn.
Runtii, faro-gelintu ma aha mid hawlyar marka aan ka warqabno argagaxa iyo baqdinta ay Daacish ku abuuraan dadka. Maydka la sii sido waxaa ugu danbeeyay Arbacdii la soo dhaafay markii ay magaalada Al Raqqa ee Suuriya ku gumaadeen ilaa 250 askari (maxaabiis ay ka qabsadeen xukuumadda). Waxaa adag sidii degaanku uu ugu babbac dhigi karo Daacish mar haddii laga wada dheragsan yahay cidhib-xumada iyo bahalnimada ay ku xasuuqaan cid kasta oo ay u arkaan in ay lid ku tahay. Ma muuqato xukuumad ama koox uu Maraykanku si dhab ugu tashan karo. Waxaaba ay u dhowdahay in ay dantu geyeysiiso iskaashi u la yeesho Bashaar Al Assad oo dagaaladii sokeeyay kurka ka gooyay ilaa (200,000) si uu u xejisto kursigiisa. Si kastaba ha ahaatee, sheekadu waxaa ay u eeg tahay mid ku socota odhaahda “cadowgaaga, cadowgiisu waa saaxiibkaa” taas oo Maraykanku cadowga dhabta ah uu u arko Daacish.
“Ma dhici kartaa in laga adkaado kooxda Daacish haddii aan la faro-gelin Suuriya?” Ayuu isweydiiyay General Martin Dempsey, Guddomiyaha taliyayaasha ciidamada Maraykan. Waxaana uu isugu warceliyay, “maya, maya taas la’aanteed waxba lama qaban karo.”
Ururka Dacish maxaa uu kaga duwan yahiin ururadii mintidka ahaa ee jiray? Waa maxay dhaqaalaha iyo hubka ay ku dagaalamayaan? La soco Qaybta 2aad ee “Waa Maxay Ururk Daacish Ee Adduunku U Soo Warmo-Tumanyo?
Dawlad Burbureysa Waxaa Lagu Gartaa Iskushaandheyn Badan.( Reshuffle Aan Dhamaaneyn)
Wararka maalmaahan ka soo burqanayo xubno ka tirsan qoyska madaxtooyada oo u dhuun daloolaha dhaqdhaqaaqa Qasriga madaxtooyada ka socda ayaa sheegaya In odey Siilaanyo iyo inta ku xeerani ay soo wadaan isku shaandheyn ama reshuffle taasi oo sheegeysa in wasiiro cusub lagu soo dari doono dawlada,qaarna la eryi doono,waxaa kale oo iskushaandheynta ku jiri doona agaasimayaal,badhasaabo,iyo hayadaha madaxbanaan,isku shaandheynta waxaa lagu wadaa in ay dhacdo dhawaan.
Marka maamul Dimuraadiyad lagu soo doortay uu u xuubsiibto Kelitalisnimo iyo Diktaatooriyad waxaa ka luma haykalka dawladnimo iyo sunaha maamul ee dalka.
Waxaa Maamulkaasi ku dhaca shaki aan dhamaaneyn oo uu ka shakiyo masuuliyiinta uu xilka u magacowday,waxaa ku dhaca isfaham la’aan maamulkaasi iyo shacabkii soo doortay,Marka uu waayo kalsoonidii Ummada wuxuu bilaabaa qof jecleysi,eex.qaraabo kiil,musuqmaasuq xad dhaafa iyo cadaalad daro baahda.waxaa isku dhex yaaca maamulka oo yeesha wax u eg dhawr madaxweyne in ay dalka ka taliyaan oo mid waliba dhankiisa xilal u magacaabo gaarna eryo sida maanta ka taagan Somaliland.
Xukuumada maanta talada haysaa waxay ku mashquushay wax la yidhaado isku shaandheyn( reshuffle) aan dhamaaneyn oo joogto ah magacaabis iyo eri,laga soo bilaabo ilaa maalintii ay xukunka wadanka la wareegtey xukuumada siilaanyo waxay iskushaandheyn sameysay in ka badan lix(6)jeer ,4 Afartii sano iyo 2labadii bilood ee ay xilka haysey.
Sida la wada ogsoonyahay reshuffleka ama isku shaandheynta xukuumada siilaanyo kuma saleysna aqoon iyo waayo aragnimo ee waxay ku saleysan tahay Eex,Ninjecleysi,Qaraabokiil,Guulwadanimo,iyo yaa ina ogol oo raali ka ah maamulkeena, waxaa hubaala in dadkii aqoonta lahaa ee reer somaliland ay maamulka debeda ka joogaan oo laga doorbidey kuwo aan cilmi iyo caqli fiican aan midna lahayn balse qoyska madaxtooyada u daacada(guulwadayaal ama kaadiriin ama wax madiidayaal).
Xukunka siilaanyo wuxuu marayaa halkii macalinkiisii Siyaad Barre marayey 1990,waxaad ka garan kartaa Siyaad Barre wuxuu sameeyey iskushaandheyn (4)afar jeer sanadkaasi 1990 keliya mar shanaad muu sameyn oo wuu burburay maamulkiisii.
Calaamadaha lagu garto maamulka dumaya ama meesha ka baxaya waxaa kow ka ah Iskushaandheyn fara badan,musuqmaasuq,qaraabo-kiil,eex,ninjecleysi,nin toocsi,iyo maamulkaasi oo kalsoonidii shacabkiisa waaya,waana ta maanta uu ku suganyahay maamulka keli taliska ah ee Siilaanyo, bal aan eegno halka uu siilaanyo iyo maamulkiisu ku danbeeyo.
Yusuf Abdilahi Janale
War-saxaafadeed Xisbiga Waddani ku hambalyeynaayo Guulaha isdabajooga ah ee uu soo hooyey ciidanka Qaranka Somaliland
Waxaan halkan ka salaamayaa warbaahinta xorta ah iyo dhammaan akhristayaasha sharafta leh , waxaanaan ku salaamayaa salaanta ISLAAMKA EE ASALAUMU CALAYKUM.
Haddii aanu nahay XISBIGA MUCAARIDKA AH EE WADDANI, waxaan hambalyaynaynaa ciidanka qaranka ee Somaliland oo si hagar laanta ah ee uu waajibkiisi qaran u gutay ee ah inuu ka difaaco dalka cid aliyaala iyo cidii ku soo xadgudubta xuduudaha Jamhuuriyada Somaliland,
Waxaynu ka war qabnay in maalmahanba colaad Somaliland dhexdeed laga maleegayay oo uu hubku iyo saanaduba ka imanayeen Somalia, taas oo looga dan lahaa in la iska hor keeno dadwaynaha Somaliland, iyada oo la adeegsanayay Siyaasiyiin nabad diid ah kuna caan baxay iska hor keenka shacabka kuwaas oo Iskooda u shaqaysata oo aan u dananayan shacabka reer Somaliland.
Xisbiga Waddani wuxuu mudooyinkan danbeba ka qaylinayay dawladda laga dhex dhisayo dalkeena Somaliland, waa ilahay mahadii mar haddii ay xukumadeenu u dego nuglaatay baaqi xisbiga waddani, waxaanu leenahay haddii ay xukumadeen sidaas oo kale ugu dhego nuglaan lahayd baaqyadii horena sidaa maanta anuu guushan ugu amaanayno baynu u guulaysan lahay.
Waxaanu ku baaqaynaa in cidii reer Somaliland ah ee wax tabanaysaa ay wadahadal ku dhamaysato ee aanay iyadu sharciga gacanteeda ku goosn soona adeegsan ciidamo shisheeyah iyo qori caaradii.
Waxaanu u soo jeedinaynaa Xukumadeena.
1. inay talaabo caad ka qaado xidhiidhki inaka iyo Somalia
a) in la laalo dhamaan wadahadaldii Somalia iyo Somaliland.
b) in la joojiyo isu socodkii Somalia iyo Somaliland
c) in la xidho xuduudaha Somlia iyo Somaliland.
d) In dib u eegis lagu sameeyo Qaxoontiga Somalia
Halkani ka akhriso magacyada maxaabiistii maanta ay ciidmada qaranku ku soo qabteen Saaxdheer
Halkani hoose ka akhriso magacyada maxaabiistii maanta ay ciidmada qaranku ku soo qab qabteen aaga Saax dheer oo dawlada Fadaraalka ee Somaliya sida sharici darada ah ay shirka aan dastuuriyan dalka Somaliland laga ogalayn ay ku qabsanyeen kaasi oo uu hor bboode ka ahaa xildhibaanka ka tirsan dawlada fadaraalka ee Somaliya xidhibaan Cali Khlafiif Galaydh oo carar saaka arooryadii hore nafta kula galay dalka Itoobiya.
Magacayada Maxaabiista Magaca Hooyada Qabiilka Da’da
1- Ciise Cabdi Cabdulle Ina Shamis Cabdi Xasan Ugaas 30 jir
2- Siciid Jaamac Ismaacil Ina Aamina Cismaan Faarax Garaad 43 Jir
3- C/risaaq Axmed Saleebaan Ina Maryan Cabdi Axmed Garaad 23 Jir
4- Xuseen Xasan Jaamac Ina basra Xasan Faarax Siyaad 26-jir
5- Asad Xuseen Cismaan Ina Caasha Cabdi Khaalid 33 jir
6 Xildhibaan Maxamuud Axmed Ibraahim Ina Nadiifo Doodi Maxamud Gaarad 50 Jir
7- Dhuux Deeq Axmed Ina Maryama Maxamed Khaalid 23 Jir
8- Shir shoole Maxamuud Xaaji Hirad Ina Aamina Gelle Bahar Same 45 Jir
9 Maxamed Cumar Qambi Ina Faadumo Cawil khaalid 48 jir
10 Ma hayno magaciisa oo waa dhaawac oo lagu dawaynaayo cisbitaalka Burco
Xogahayihii Arimaha Debeda Xisbiga Waddani oo is casiley,Xubinimadii xisbigana ka baxay+ xoggo laga helay iscasiladiisa!
Sida ilo xogogaal ahi u xaqiijiyeen jornalizem Maxamed Cismaan Fadal oo ahaa Xoghayaha Arimaha Debeda ee Xisbiga Waddani ayaa iska casilay xilkii xoghayanimo iyo Xubinimadii Golaha dhexe ee Xisbiga islamarkaana gebi ahaanba ka baxay xisbiga Waddani.
Fadal ayaa la sheegay in iscasiladaas uu dalbaday uu ka aqbalay Gudoomiyah Xisbiga Waddani Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro.
Inkastoo Fadal laga soo xigtay inuu hawlaha Xisbiga Waddani isaga casilay si uu hawlihiisa gaarka ah ugu gacan banaanado haddana xoggo jornalizem ka soo ururisay siyaasiyiin aad ugu dhuun daloola dhaqdhaaqayadiisa siyaasadeed iyo Madaxtooyada ayaa sheegaya inuu xidhiidh iyo kulamo hoose la yeeshay Madaxweyne Siilanyo islamarkaana quudaraynayo, haystana balanqaad in loo magacaabayo xilka wasiirka wasaarada Qorsheynta oo uu mar wasiir ka soo noqday ,halka wasiirka qorsheynta Sacad Cali Shirena loo wado wasiirka Maaliyada,Wasiirka Maaliyada Hadda Sheekh Samaalena La hadl hayo in loo magacaabi doono wasiirka Wasaarada Awqaafta iyo diinta.
Isku soo wada duuboo Fadal ayaa isku wada inuu noqdo Wasiirka Koowaad ee xubnaha Xukumada Siilanyo kaga jira Beelaha Habaryoonis isagoo hayb ahaana bedeli doona Wasiiru-dawlaha Maaliyada Cismaan Cabdillahi Saxardiid oo isagu qaliin adag oo xagga wadnaha lagu sameeyay islamarkaana dhawaan dalka soo gaadhey bixiyena Signal ah in dhaktarkiisu siiyey talooyin aan u saamaxayn inuu olole siyaasadeed galo balse nasasho dheer galo,ku darsoo gunadiisuna fooqal daaqo tahay maadaba uu galay qaliin culusn xagga wadnaha ah.
Balanqaadaddii Xisbigga Kulmiye iyo Madxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Maxaad ka Xasuusataa?
Akhristee, waxaa hoose ku qoran balanqaadkii xisbiga talada haya ee Kumiye uu ku qoray Booggii Cagaara. Qaybtani waa qaybtii khusaysay Qurbajoogga. Si fiican akhristee u dhuux oo bal waxa ka qabsoomay adigu qiime. Waxaanu u qaraa sidan:
Waaya aragnimada caalamka waxa laga dheehan karaa kaalinta wax-ku-oolka ah ee Qurbajoogga kala duwani ka ciyaareen dib-u-dhiska dalalkii ay markii hore ka soo jeedeen. Qurbajoogga reer Somaliland na kama duwan dhiggiisa. Haddaba si looga faa’idaysto awoodaha xadiga badan ee qurbajoogga, dhaqaalahooda iyo khibradoodaba, xisbiga Kulmiye wuxuu ku tallaabsanayaa arrimaha soo socda:
* In la sameeyo xafiis xidhiidhiya arrimaha Qurbajoogga oo hoos yimaadda Madaxweyne kuxigeenka
* In la dhiirigeliyo kooxaha kala duwan ee qurbajoogga inay is abaabulaan si ay u yeeshaan wakiilo u fududeeya inay si micno leh uga qayb qaataan arrimaha ka socda dalka hooyo si ay saamayn wax-ku-ool ah ugu yeeshaan jihada ay qaadanayso barnaamijyada qaran ee horumarineed
* In la abuuro kayd xogeed qaran (national data base) oo ay ku ururo khibradaha mihaniga ah ee Qurbajoogga taas oo looga dan leeyahay in danaha qaran looga faa’iidaysan karo halkii iyo goortii ay ku habboon tahay;
* Abuuridda ilo rasmi ah oo ay dadka qurbajoogga ahi ka heli karaan xogaha ay u baahan yihiin ee wax ka taraya dedaalada horumarineed iyo dhaq-dhaqaaqa bulsho ee ka socda dalka hooyo.
* In Qurbajoogga dalka imanaya loo fidiyo adeeg wacan oo soo dhowayneed.
Waxaa kor ku qorn shan qodob oo doorashaddii 2010 uu xisbiga Kulmye balan-qaaday, haddii aan qodob qodob u kor istaago oo aan eego waxa ka qabsoomay waxaa inoo soo bixi-doona in Qurbajoogu mar labaad aanay sinaba u dooran doonin Mudane Siilaanyo iyo xisbigiisa.
In la sameeyo xafiis xidhiidhiya arriimaha Qurbajooga, Akhristee, weli ma maqashay cid sheegaysaa inuu jiro xafiiskaasi? Muxuu qabta xafiiskaasi? Ayaa u madax ahaa oo lala xidhiidha? Su’aalaha iyo qaar kale oo badan ayaa isweydiin leh.
Waxaa sidoo kale Kulmiye balanqaaday in xukummadu abaabuli doonto in ay wadan kasta oo ay joogan qurbajoogu, si ay uga qaybqaataan horumarka wadanka, sido kale, in arrimaha wax-ku-oolka ah ee Somaliland u baahan tahay ama barnaamijadda Qaran ee horumarineed ay la wadaagan xukummadda. Akhristee, miyaad aragtay meel arrinta xukummaddu kaga waramayso?
Waxaa kale oo ay Xukummadu balqaaday in ay abuuri-doonto kayd xogeed qaran (National Data Base), muwaadin miyaad maqashay meel arrinta xukummadu kaga hadalyso, xafladdii loo qabtay Qurbo-jooga sannadka 2014ka ma ku maqshay Wasiir, Agaasme, ama masuul xil ka haya xukummada oo soo hadal qaaday arrinta?
Waxaa kale oo Xukummadda talada dalka haysaa balanqaaday in la abuuridoon ilo rasmi ah oo dadka qurbajooga ahi ka heli karaan xoggaha ay u baahan yihiin, akhristee, weli ma argatay ama ma maqashay meel ay xukummadda maanta taladda dalka ahaysa ay ku soo bal dhigtay balanqaadada kor ku xusan ee ay ka mid tahay ilo rasmi ah oo xoggaha ka heli karaa Qurbajoogu.
Midka ugu mihiimsan ee Kulmiye ama Madaxweye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu balqaaday waxay ahayd in Qurbajooga dalka imanaya loo fidiyo adeeg wacan, muxuu noqday adeega wacani? waxaa la socoteen in sannadkii hore 2013 Diyaaradda Ethiopia Airlines ay joojisay in ay timaado Hargeysa, waxay arrintaasi ku danbeysey mid aan halka kaga sheekayn karo ma ha. Waxaa sannaka lagu soo dhoweyey Qurbajooga waa kordhin lacag aan lahayn xisaabtan (accountability) oo meel ay ku baxayso, cid qaadaysa iyo meel lagu soo sharciyey aanay jirin.
Qodobadda kor ku qoran waa balan qaadkii xukummada maanta talada dalka haysa, Booggii cagaara ee balanqaadadda xisbigii Kulmiye dadka ku beer-laxawsanayey wax ka hire-galay waa mid aad u yar waxaa tu’saale kugu filan sida ay maanta ula dhaqmaan Qurbajooga, waxaa intaa u dheer iyaga oo Qurbajooga kula dhex-wareegay baryo iyo naga caawiya dhismaha wadadda Ceerigaabo.
Akhrustee, haddii maanta xukummada taladda dalka haysaa ay fulin lahayd balanqadyadaa aad u qurxoon, miyaan Qurbajoogu maanta saddex lab ugu wax-qabad-badnaan lahay wadanka, inkasta oo maantaba Qurbajoogu uu qayb libaax ka qaato horumarka wadanka, sida Wadooyinka, Cashuurta, Dhismayaasha, Ganacasiga, Tabaruca dadka tabaalaysan iyo qayb kasta oo horumarka wadanka ka mid ah.
Akhristee, ka fiirso in aad codkaaga kaga lumo balanqaadadda noocan oo kale ah, sidoo kale, ka fiirso in aad codkaaga dib ugu celiso Xisbigga Kulmiye iyo doorashadda madaxweynha maanta Muddane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Xukuumadda S/land Miyey weyday Masuul u qalma Mareeyaha Haamaha Shidaalka Berbera?
Bishii May.15.2014-ayey ahayd markii Saleebaan Siciid Cali oo ku magacawnaa Isuduwaha Diinta iyo Awqaafta Gobolka Saaxil loo magacaabay Maamulaha Haamaha Shidaalka Berbera. Maamulahan ayaan wax shaqo ah ku lahayn wax Maamul iyo Maareyn, iyadoo sidoo kalana aanu aqoon durugsan u lahayn hawlaha ganacsiga.
Sh Saleebaan Siciid Cali ayaa ilaa Xukuumaddii Daahir Rayaale Kaahin ku magacwnaa Isuduwaha Diinta iyo Awqaafta Gobolka Saaxil, iyadda oo xiligii Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo taladda qabatay uu ka mid noqday Xubnaha u dhago-nugul awaamiirta ka soo baxa Xarunta Qasriga Madaxtooyada, waxaanu hor-seed ka ahaa Xubinihii Maamulka Gobolka iyo Degmada la safnaa ee sidda weyn uga soo hor-jeedday Shirkii Dan iyo Duco ee Beesha Gobolka Saaxil ay ku qabsatay Deegaanka Dubur.
Maareeyaha Kaydka Shidaalka Berbera ayaa ah wadaad qunyar socod oo malcaamad quraan yar kula lahaa Magaalada Berbera , isla-markaana ay ku adagtahay xanashada xilka maareeyaha haamaha Shidaalka berbera oo ah rugta looga taliyo shidaalka Dalkaoo dhan .
Maareeyaha Kaydka Shidaalka ,ayaa ahaa ka dambeeyey xilka qaadistii wasiir ku xigeenkii amniga ee wasaarada arimaha gudaha Cabdilaahi Abokor Cismaan, kaasi oo uu in uu wadaadkani kula dhex dagaalamay xarunta madaxtooyadaKalsooni ka haysto, waxuuna ku dhexfeedhay, isla goobta iyada oo sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay sheegeen in khilaafkoodu ka dhashay soo xulistii xubnaha Golaha dhexe ka soo galaayay G. Saaxil shirweynihii XisbigaKulmiye.
Dhinaca kale Saleebaan Siciid Cali oo muddo dheer ahaa Isu-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee G. Saaxil ayaan wax agab xafiis iyo dhukmati(documents) ku wareejin Isu-duwahan danbeeyey ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Gobolka Saaxil taas oo Guddoomiyaha G. Saaxil uu madashii xil-wareejinta ka cadeeyey in Saleebaan si weyn u dayacay Xafiiskiisii taas oo dadkii xaflada ka soo qayb galay ku noqotay yaab iyo Amakaag ,iyadoo lagu macneeyey sida iminkaba jirta in Saleebaan shaqada xafiiskaa Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee uu ku magacaabnaa uu kaga mashquulay shaqooyin kale oo uu u hayay Xafiiska Madaxtooyada.
Isku soo wada duuboo Maareeyaha Haamaha Kaydka shidaalka Berbera , ayaa dadweynaha Berberana ugu daraan xilal kale sida Sheekha dilaalka Berbera iyo Wakiilka Madaxtooyada G/ Saaxil , Bulshadda ku dhaqan Gobolka Saaxil ayaa Xubintan loo magacaabay Maamulka Haamaha Shiddaalka Berbera ku sifeeyay inuu Xilkaasi ku hantiyay u dhago-nuglaanta awaamiirta Madaxtooyadda, isaga oo Todobaad-kiiba afar maalmood ku sugnaadda Magaaladda Hargeysa.
Ayaa waxa uu ka mid yahay Dadka Wax laga waydiiyo Talada Gobolka saaxil sidoo kalena ka mid ah Dadka ugu dhaw Aqalka Dalka Laga hogaamiyo ee Madaxtooyada iyada oo sida la sheegay ay qaraaba dhaw yihiin Marwada Madaxwaynaha Somaliland.
Waxyaalaha kale ee lagu xasuusta waxaa ka midda , isagoo tahli kari waayey inuu dhamaystiro dayactirka Dhismaha Xafiiksa Badhasaabka , Gurigan oo ahaa kii loogu talo-galay xarunta G/Saaxil ayaa qabyo ah,Bahaluhuna ku xaroodaan , una xaniban dhameystirka Maareyaha Haamaha Shidaalka Berbera Sh.Saleebaan oo dhaqaalihii loogu talo-galay gebihaanba si toosa u qaatay, isla-markaana ka baaqsaday inuu qabyo-tiro, si hoose ayaa loo siiyey markii hore, kaas oo aan lagu tartamin dayactirkiisa Madaxtooyadu amartay in la siiyo, hawshii dayactirka dhismaha xafiiska Badhasaabka , waxaa dhaqaalaheeda bixiyey Maareeyaha Dekeda Berbera Cali Xoor-xoor ama Maayarka Berbera Cabdishakur Ciddin. $30.000 (Sodon kun oo dollar) dhamaan lacagtaasi gacanta ayey u gashay.
Dhinaca kale waxuu fashileyey dadaalo ay doonaysay marwada madaxweynahu inay ku kasbato, Dadka reer saaxil , sidaa daradeed waxa dad badan ku macneyeen uma u arkaan ayaa nasiib daro nin siyaasadda layli ku ah oo aan aqoon u lahayn sida dadka loo soo dhaweysto ama loola macaamilo.
Runtiina Dadweynaha S/Land aad ayey uga xunyihiin in xukuumada u soo magcawdo Nin aan aqoon u lahayn xilka uu qarankiisa u hayo , sidaa daradeed Bulshadu waxay ka amakaag santahay Digreetooyinka ka soo baxaaya madaxtooyada, xil magacaabiseed ee masuul aan aqoon ehel u ahayn.
Xukuumaduna waa inay aqoonsataa :- Dhalliishu waa arrin jirta. Qof kasta oo waxqabad loo magacaabo, haddii aqoon la,aan iyo gaabis laga dareemo waa la dhalliili karaa, haddii guul iyo waxtar uu keenana waa la hambalyeyn karaa. Ummadaha aynu nidaam ka dawla dnimada kaga dayannay waxa ay sameeyaan dhalliil toosin ah (“Constructive criticism” oo mararka qaarkoodna loo soo gaabiyo ‘CC’ or ‘Concrit’). Waa haddii ay lagama maarmaan noqoto oo la dhegaysanaayo.
Sh.Salebaan waa wadaad, lakiin aan cilmi maadiya ama wax shahaadooyin ah heysan midna ,isla-markaana khibradiisu waxay ahayd macalin dugsi quraan, isla-markaana ah Shaqsi aan garawshiyo laheyn oo jeebka wax ka fahma, waana nin ku xeeldheer dibin daabyooyinka oo wax uu jara mooyee aan waxba tolin, isla-markaana ka hadla markasta, reer hebel, jufo hebel, kaddibna jilib hebel, ugu dambeyna qoys iyo wax ka sii hooseeya.
Madaxweyne Siilaanyo , Ilaahay hakaa dhigo mid naga bedela shaqsiyaadka wax ma qabtayaasha ah.
By, Saleban Cali Cateeye
Shidaal yaraan soo foodsaartay Hargeysa iyo kaalmaha shidaalka iibiya oo joojiyey iibinta Gaaska ama Badroolka
Waxa saaka ka taagan magaalada Hargeysa shidaal la’aan saameysay gebi ahaanba dadka wata ama isticmaala Gaadiidka kuu shaqeeya Gaaska ama Badroolka siiba Takaasida.
Ku darsoo waxaa joojiyey iibinta shidaalka Badroolka kaalmaha shidaalka iibiya ee magaalada Hargeysa iyadoo kaalin waliba macaamiisheeda u kaydinaysa intay hayso.
Macaamiisha ayaa halkii Litir ee Badrool ah saaka meelaha Qaar lagaga iibinayaa Hal dollar iyo Badh,halka qof qofka iyadoo macaamiil loogu shubaayo soo dul istaagana lagaga iibinaayo laba dollar halkii litir waaba hadii la helo.
Geesta kalena qaar ka mid ah kaalimaha shidaalka iibiya ee Hargeysa ayaa Warfiiyeenka Qarannews u sheegay in la filaayo inuu dhawaan dalka soo gaadho shidaal qaaliya islamarkaana qiimaha Badroolku kor u kici doono.
Isku soo wada duuboo xukumada Siilanyo Ayaa afka ka xidhatey sababaha keenay shidaal yaraanta ama shidaalka Bararka maadabay gacanta ku hayso kaydka shidaalka dalka,maamushana Haamaha ganacsatada soo waarida shidaalka ku keydasadaan.
Marwo Amina Weris Siilanyo xoogii iyo xasuustuu lahaan jiray bay ka doonaysaa!
Waxa waa hore dal carbeed ka dhacday qisadan: Nin baa beer lahaa oo dameer uu yaraan ku iibsaday baa u shaqeyn jiray oo uu beerta ku waraabin jiray. Dameerkaa ayaa reerka u ahaa ilaha dhaqaale ee uugu weyn ee wax ka soo galaan oo beerta ayay reerku ku noolaayeen. Berigi danbe ayuu dameerkii gaboobay oo hawl gab noqday. Ninkii dameerkii iskamuu deyn ee wuxuu ka doonay in uu ku sii shaqeysto oo wuxuu ka doonay xoogii uu lahaan jiray markuu yaraa dabeed karbaash ayuu dhogortii kaga idleeyay.
Dameerkii aad buu u dhibtooday oo meel walba dhiig baa ka yimaada ileyn dhogor malaha e. Mudo ka dib ayuu geeryooday dameerkii. Dabeed ilaahay subxaanuhu waa tacaalaa ninkii sidii kagamuu tegen ee isan wuu kashifay oo huga ayaa ka cararay … Nin kii marka maro la saaraba wey ka dhacdaa oo aqal hoostii ayaa lagu qarin jiray mudo dheer iyadoon cidi fahan sanayn waxa sababay in maradu uuga cararayso. Markii danbe culmo ayaa loogo yeedhay suaalo weydiiyey laba dumara oo uu ninkaasi qabay oo ay ka mid ahaayeen ninkani muxuu ka shaqeyn jirey. Dumarki waxay sheegeen in uu cadibi jiray dameer reerka u shaqeyn jiray oo uu dhenged dhogorta kaga idleeyey dhiigna ka iman jiray ka dib markii uu xoogi ka idlaaday … Culimadi wey fahantay arinkii dabeed waxa la yidhi kabcada ha la geeyo oo ha loo duceeyo sidii bay maradu isugu taagtay markii loo duceeyay.
Hadaba Amina Weris waxay Silaanyo ka doonaysaa xoogii iyo caafimaadkii uu lahaan jiray oo dulmi weyn bay ka gelaysaa. Waxa la xaqiijinayaa in uu xitaa dhawaan yidhi xukunka waan iska dhiibayaa oo ma awoodi karo. Amina Weris wey weeratay oo ku gacan saydhay oo wey ka diiday. Hadaba Amina Weris dilmiga ay Silaanyo ku heyso waxaan ka yaabayaa in calaamo aan hore loo arag lagu arko ileyn nin xitaa xasuusta iyo socodku ku dhib yihiin oo STROKE ku dhacay ayay leeday car kursiga ka deg e.
Bal aynnu sugno Amina Weris dulmiga ay odeygeeda iyo Somaliland iyo walaal keed Cali jirde ka gashay halka uu ku danbeeyo.
Amina Weris talow ma ogtay in aan qofna ifka laga kaxayn ilaa la tuso dulmiguu dadka ka galay hadii kalena sakaraad ka lagu dhibo. Haday ogtayna Amina Weris lacag badan bay heshoo dan iyo muraad toona kama yeelanayso waxa hadhow dhici doona ee iyadu maanta uun bay la caqli tahay iyo cadibaada odeygeeda. Silaanyo wuu ku dulmanyay gacanta Amina Weris midhkaa laaxin laga jari maayo.